I-Ultrasonication namafutha avuselelekayo - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ama-ultrasonication nama-Fuels avuselelekayo
I-Biodiesel, i-bioethanol ne-biogas yizindlela ezintathu zokuguqula izinto eziphilayo zibe ngamafutha ahlaza. Ultrasonication ithuthukisa ukukhiqizwa kwamandla nokuguqulwa ukusebenza kahle.
Amakhemikhali avuselelekayo ajabulele ukukhula okudingekayo njengamanani amafutha aveza izindawo eziphakeme. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-ultrasonic ekukhiqizeni amakhemikhali aluhlaza, njenge-biodiesel, i-bioethanol ne-biogas kuthuthukisa ubuchwepheshe nobuchwepheshe bokusebenza.
I-Biodiesel kusuka ku-Olive Yemifino ne-Fat Fat
I-Biodiesel yiphethiloli evuselelwa engasetshenziswa emajini we-diesel njengenye ye-diesel fuel eyenziwe nge-petroleum. I-biodiesel yenziwa ukuguqulwa kwe-transesterification emithonjeni, njengamafutha yemifino, amafutha wezilwane noma amafutha. Okuvame kakhulu yizinto zokudla ezifana ne-soya, i-rapeseed noma amafutha algae. Ukukhiqizwa kwe-biodiesel kuhilela ukusabela okubangelwa utshwala (methanol noma i-ethanol). Ukuxuba ama-ultrasonic wamafutha, amafutha noma amafutha ngotshwala kuthuthukisa ijubane lokuphendula futhi likhiqize kakhulu. Lokhu kunciphisa izindleko zokutshalwa kwezimali nokusebenza.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic mixing reactors ye-biodiesel!
I-Bioethanol kusuka ku-Starch ne-Sugar
I-Bioethanol isetshenziswe njengendlela ehlukile eluhlaza kuphethiloli. Yenziwe ngamabele, ukolweni, amazambane, ushukela, ilayisi nezinye izithelo ngokuvutshelwa. Imvubelo isetshenziselwa ukuvotela isitashi neshukela ezitholakala kulezi zitshalo ku-ethanol. I-Ultrasonic Disintegration zezakhiwo zamaselula kanye ukukhishwa kwezinto ezingaphakathi kwe-intracellular kunciphisa usayizi wezinhlayiyana futhi kuveza indawo enkulu kakhulu kunezinyunyana ngesikhathi sokudumala. Lokhu kuthuthukisa ukutholakala kwe-starch kanye noshukela kanye nemiphumela yokuvuthwa okusheshayo nangaphezulu okuholela ethanol eyengeziwe.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana cell nokwahlukana futhi Ukukhipha!
I-Biogas evela ku-Waste and Sludge
Imfucuza yemvelo kaMasipala, i-sludge yamanzi okugcoba, i-muck kanye nomquba usebenza njengomthombo we-biogas. Ukucubungula izinto ezinjalo ku-aerobic noma i-anaerobic digesters kuguqula izinto eziphilayo eziba yi-biogas. I-Ultrasonic ukuhlukaniswa kwezinto eziphilayo ngaphambi kokugaya kungashintsha isakhiwo sezinto ezibonakalayo, futhi kukhishwa futhi kusebenze ama-enzyme. Lokhu kuthuthukisa ukugaya kwezinto eziphilayo eziholela ekucubungulweni okusheshayo, ngaphezulu kwegesi kanye ne-sludge encane. Lokhu kukhulisa amandla omgogodla okhona futhi kunciphisa izindleko zokulahla.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana i-ultrasonic sludge ukuxuba!
Ultrasonic Energy Balance
Ukucubungula okukhulunywe ngenhla akudingi amandla amaningi e-ultrasonic. Ngokuvamile amandla esele njengengane ye-result eyenza amandla asetshenziselwa ukukhiqiza i-ultrasound. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic anesonke ukusebenza kahle kwama-85%. Lokhu kusho ukuthi ngaphezu kuka-85% wamandla kagesi aguqulwa futhi ahanjiswe kulesi sakhiwa ngamandla kagesi. Imfuneko yangempela yamandla yenqubo ingathathwa ngesilinganiso esincane isebenzisa iproksi ye-1kW ultrasonic ebangeni lesikhulu. Yonke imiphumela evela ezinhlolweni ezinjalo ze-bench-top ingaba senziwe kalula. I-Hielscher inikeza imishini yokucubungula i-ultrasonic, emhlabeni jikelele. Ngamaphrosesa ase ultrasonic kuze kube 16kW amandla ngedivayisi eyodwa, akukho mkhawulo ekutheni isitshalo noma umthamo wokucubungula.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ekukhiqizeni amakhemikhali avuselelekayo.
Ukusetshenziswa kwama-Ultrasonic Reactors ku-Small Scale Continuous Biodiesel Process – I-Graham Towerton (2007)
Biodiesel kusuka Algae usebenzisa ultrasonication
Ukushesha-Ukuguqulwa Kwamafutha E-Soya Ukusebenzisa i-Ultrasonication
I-Biodiesel Process Efficiency
sikhungo ultrasonic ngcono biodiesel ukuguqulwa ephakeme biodiesel isivuno
Ukukhiqizwa kwe-Biodiesel & Ukuguqulwa kwe-Biodiesel
I-Biodiesel nge-Ultrasonically Improved (Trans-) Esterification